1. Inona ny AOD 9604?
2. Ahoana ny fiasan'ny AOD 9604
3. Vokatra sy tombontsoa amin'ny fampiasana AOD 9604
4. Ahoana ny fampiasana AOD 9604?
5. Rahoviana aho no hahazo ny AOD 9604 Results?
6. Misy fiantraikany amin'ny fihariana ve ny AOD 9604?
7. Fikarohana momba ny klinika momba ny AOD 9604
8. Fanontaniana mahaliana momba ny AOD 9604
Raha nitady peptide tsy misy fiantraikany mahery vaika ianao, dia mety ho nandre momba ny AOD 9604. Eny, na ny FDA aza nanamafy fa azo antoka izany amin'ny 100% azo avela amin'ny mpampiasa azy. Fantaro raha miasa ny AOD 9604, ny tombontsoa azony, ny valiny, ary ny fikarohana ara-pitsaboana izay manatsara ny fahombiazany.
Amin'ny adihevitra rehetra sy tsaho rehetra ao amin'ny lalan-drivotra, tokony ho gaga ianao raha AOD 9604 miasa.
Hifanaraka amiko ianao fa tsy afaka mandeha isan'andro ianao raha tsy mibebaka loatra na fanahy marefo, sa tsy izany?
Ao amin'ny statistika vao haingana, mihoatra ny 31% amin'ny vahoaka amerikana no mijaly noho ny matavy loatra na ny lanjany. Eny, mampihetsi-po ny angon-drakitra, amin'ny filazàna fa ny voka-dratsiny dia vavahadin-tsokosoko tsy azo lavina amin'ny aretina maro toy ny homamiadana sy ny diabeta.
Raha tadidritra ianao, fanatanjahan-tena, na bodista elitika, dia azonao atao ny mampiasa sombin-tsakafo sasany. Ity zava-misy ity dia hametraka ny fototra iarahantsika mifandray amin'i AOD 9604 amin'ny fiterahana. Ireo fanafody ireo dia kalesy, na mikasa ny handany ny lanjany ianao, handoro ny tavy ao an-kibony, hanangana hozatra, na hanana karazana sodika.
Ho an'ny mpangataka, ny olana dia mihoatra noho ny hoe mianjera fotsiny ho an'ny peptide miavaka. Indraindray, ianao dia voatery hitady takaitra eo anelanelan'ny famenoana mahery sy ny vokatra hafa. Raha tokony hanandrana zava-mahadomelina an'arivony ianao dia tokony hanome anao AOD 9604.
Fantatrao ve hoe nahoana aho no mampihatra io fitsaboana io? Satria izy io dia manana fiantraikany miavaka. Nisedra sy nijery fanafody anabolika marobe aho, ary afaka manamafy fa ny 90% dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny mpampiasa. Raha ny marina, mila mandefa pejy feno aho na maromaro mba hijerena azy rehetra.
Na dia izany aza dia tsy mitovy amin'ny ADN 9604 ny tranga. Angamba, ny anton'izany dia ny hoe tsy dia mahery kokoa noho ny HGH izy io.
Noho izany, inona no fahadisoam-panantenana rehetra AOD 9604 misy atody? Jereo.
1.Inona ny AOD 9604?
Ny fitsaboana anti-obesity-9604 (AOD-9604) dia fanehoana an'ohatra ny hormonal ny fitomboan'ny olombelona. Anisan'ireo peptide tsy fahita firy izay nahazo ny fankatoavan'ny FDA ho sakafo fanampiny any Etazonia.
Ny molekule dia sombin-peptide izay nopotehina tao amin'ny C-terminus, izay ny asidra amine (AA) dia maka ny siramamy hipolytika HGH. Io faritra hormonina io dia avy amin'ny AAs 177 ka hatramin'ny 191 ary mifehy ny fofona mandoro. Toy ny aritmetika sinoa ve aminao izany? Eny ary, raha manao izany, dia aza mitebiteby satria ny antsipiriany dia fotsiny amin'ny fombafomba.
AOD 9604 vovony mena dia singa simika misy tarehintsoratra 221231-10-3. Azo alaina amin'ny endrika injiziona sy amin'ny crème transdermaly izy io. Ny tsimok'aretina dia safidy tonga lafatra satria mampitombo ny tahan'ny fihenan-tsakafo izy io ary manatsara ny fivoaran'ny zava-mahadomelina.
Azonao atao ny manontany tena raha io no fanafody mampidi-doza, anabolika, na fanafody prescription. Tazony ny soavalinao fa ho tonga any amin'ny farany ambany amin'ity mistery ity aho. Raha ny marina, ny tombontsoa azo avy amin'ny AOD 9604 dia ny taolana fifandonana, indrindra amin'ny fitondrana ara-panatanjahantena.
Ny AOD-9604 dia niorina tamin'ny alàlan'ny 1990 taloha, nalain'ny Profesora Aostraliana, Frank Ng, avy ao amin'ny Oniversiten'i Monash. Ao amin'ny 2003, ity medikaly fanodinkodinana ity dia nanjary patanty momba ny Metabolic Pharmaceuticals Limited any Aostralia. Ny fonosim-panafody fototra dia ny fitsaboana ny matavy loatra amin'ny famenoana ny fatiantoka mavesatra sy ny fandoroana ny fatina.
Hatramin'ny namokarany, efa nisedra fitsapana henjana ny zava-mahadomelina. Ny fitsapana natao tamin'ny modely henjana dia nahomby. Amin'ny totozy, ny AOD 9604 mahasoa dia nahitana ny metabolisma mahomby, ny fahaverezan'ny vatana fanampiny, ny lipolysis, ary ny glycerol plasma avo.
Avy amin'ny 2001 ka hatramin'ny 2007, ny Metabolic Pharmaceuticals dia nanadihady ny fahombiazan'io peptide io amin'ny olombelona. Nandritra io vanim-potoana io, ireo mpikaroka mpikaroka dia nanao fanadihadiana momba ny lohahevitra 900 tao amin'ny fikarohana momba ny klinika AOD 9604. Hatramin'ny naha-oral ny fomba fitantanan-draharaha voalohany dia toa tsy mahomby ilay fitsaboana.
Na izany aza, tao amin'ny 2010, Metabolic Pharmaceuticals dia namolavola teknolojia iray mba hamela ny fitsaboana ny zava-mahadomelina amin'ny hoditra. Taorian'izay, dia nahita ny orinasa nanamboatra karazana medikaly ny orinasa. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mandray ny AOD 9604 na ny fanapaha-kevitry ny crème transdermal.
(2) AOD 9604 Fahaiza-miforona
Synonyms · HGH sanda 177-191
Molecular Weight 1815g / Rol
Solubility - Rano
· Chlorid Sodium
Bika Aman 'endrika Vovonam-bozaka fotsy
Storage Temperature 2 ° C mankany 8 ° C
2.Ahoana ny fiasan'ny AOD 9604?
AOD 9604 dia miasa mba hanatsarana ny asan'ny mpitsabo beta-3 ary hanatsara ny fikorontanan'ny toetry ny olombelona. Mampihena ny fizotran'ny fatana, mampihena ny anabolisma, ary mampihena ny fiantraikany ratsy. Maro ihany koa ny fanadihadiana dia manamafy ny fihanaky ny zava-mahadomelina ao amin'ny fanorenana.
Ao amin'ny lipolysis, ny AOD 9604 dia miasa amin'ny fomba roa. Izany dia manala ny famotsorana siramamy fanampiny avy amin'ny tavy manjavozavo ary manakana azy tsy hanorina intsony. Ny toerana voafaritra dia ahitana ny kibony, ny kibony, ny tongony, ny sandriny, ary ny lohalika.
Noho izany, nahoana ianao no tokony hatoky ny AOD 9604 amin'ny fiterahana, raha misy fanafody fitsaboana isan-karazany amin'ny marary be loatra? Hanambara am-pahibemaso an'izay mety ho tratry ny tebiteby amin'ny banky amin'ity fitsaboana ity aho noho ny antony roa. Iray amin'izany HGH Ny sobika dia tsy manelingelina ny tahan'ny fihinanana sakafo na ny sakafo tsy tapaka. Faharoa, tsy hihazona ny filan-dratsiny mihitsy izy.
Raha toa ianao ka tsy mirehareha intsony amin'ny fandehanana amin'ny kibo lava noho ny fandrakofana mafy, ny AOD 9604 tombom-barotra no handresy anao.
3.Vokatra sy tombontsoa amin'ny fampiasana AOD 9604
Ny asa fototra AOD 9604 dia ny mifehy ny metabolisma. Na dia antsoina hoe hormone hitomboan'ny olombelona aza izany, dia tsy misy fiantraikany amin'ny IGF-1 na ny siramamy amin'ny rà izany. Ankoatra izany, ny AOD 9604 dia marefo, ka tsy mahatsapa azy ireo ny mpampiasa.
Tahaka ny HGH, io peptide io dia mihenan-tsakafo. Tsy vitan'ny hoe manafoana ny lipogenesis fotsiny izy io, fa mampitombo koa ny lipolysis ao amin'ny faritra izay misy ny fametrahana ny matavy. Noho ny vokatra lipolytika, ny FDA dia nankasitraka ny fampiasana azy ho toy ny sakafo fanampiny. Amin'ny lafiny iray, afaka miteny isika fa ny AOD 9604 dia mamaritra ny metabolisma amin'ny fatsin'ny vatan'olombelona.
Ny tena manan-danja AOD 9604 dia mahasoa dia misy fiantraikany kely amin'ny fiasan'ny insuline sy ny haibolan'ny siramamy. Amin'ireo mponina miboridana, ny fihadiana an'io fitsaboana io amin'ny fikarakarana ny sakafo sy ny fikarakarana dia toy ny fampitahana ireo paoma amin'ny orine. Na izany aza, tsy midika akory izany hoe tsy tokony hampihatra na hanamarina ny sakafoo ianao. Ny mifanohitra amin'izany, ny fampidirana ireo roa ireo amin'ny famenoana peptide dia tsy vitan'ny manampy anao handevona fatim-bovoka fa handoro kaloraly bebe kokoa ihany koa.
Ao amin'ny sehatry ny fanatanjahan-tena, ny AOD 9604 koa dia manao zava-mahadomelina mampitombo. Raha mpandidy birao ianao, ity tombony ity dia tena fisamborana eo amin'ny sandriny. Ankoatra izany, eo anivon'ireo peptides vitsy izay tsy misy vokany ratsy hafa. Ny fianarana tsy voatanisa dia nanamarina ny AOD 9604 ho an'ny fitsaboana amin'ny fanorenana hozatra ary ny famerenana indray ny cartilages.
Nandritra ny taona maro, ity peptide manohitra ny fiterahana ity dia nomanina ho an'ny fitsaboana ny osteoarthritis. Ankoatra izany dia mety ho fanoherana mahery vaika amin'ny fanoherana izany, amin'ny fampahatsiahivana fa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny mpampiasa izany.
Na ny mpahay siansa sasany aza dia manala ny fihanaky ny AOD 9604 amin'ny fanorenana ratra, dia mbola mijanona ny fahombiazan'ity fanafody ity. Ka raha manana solontenan'ny devoly ianao dia manana fanontaniana iray ho anao aho. Nahoana ny WADA no mandà ny fampiasana azy amin'ny fanatanjahantena raha tsy misy vokany amin'ny fampisehoana?
Hanaiky amiko ianao fa ny fampiasana ny AOD-9604 amin'ny tanjona hafa fa tsy ny fampiharana ara-pitsaboana dia tsy azo sakanana noho ny antony tsy fantatra.
4.Ahoana ny fampiasana AOD 9604?
Raha te-hahazo ny tsara indrindra ao amin'ny AOD 9604 ianao, tsidiho ny dokotera alohan'ny handraisanao azy. Na izany aza, raha tsy manam-potoana hiatrehana mandritra ireo fotoana fohy ireo ianao, dia afaka mamonjy fotoana lehibe ny famerenana an-tsarimihafa toy ity lahatsoratra ity.
Olona vitsivitsy no nitaraina tamiko mikasika ny tsy fahombiazan'ny fitsaboana levitra. Fantatrao ve hoe inona no nataoko? Matetika aho no milaza ny mpampiasa mba hanara-maso ny fepetra misy azy ankehitriny, ny zava-mahadomelina, ny fanafody, na ny fitsaboana. Ohatra, maka AOD 9604 Miaraka amin'ny fanafody hafa dia mety miteraka fifanoherana miiba, izay mety hanelingelina ny fizotry ny biolojika.
AOD 9604 dia tsy ho anao raha bevohoka na mampinono. Tsy mbola misy angona azo ampiasaina hanohanana an'io fifanoherana io fa ny safidy tsara kokoa noho ny sorena.
Ny karazana AOD 9604 dia 300mcg / andro. Tokony handratra ny peptide indray mandeha isan'andro ianao, indrindra alohan'ny hatory. Na izany aza, ity toro-hevitra ity dia tsy farany. Azonao atao ny misafidy ny hitazona ny poa-bolana amin'ny maraina.
Tsy misy fiofanana manokana hanarahana izany, fa manoro hevitra aho fa haka ny peptide tsy tapaka mandritra ny efa-bolana. Aorian'ny herinandro, afaka maka herinandro iray alohan'ny hijanonana indray ianao. Azonao atao ihany koa Buy AOD 9604 ary alaivo mandritra ny dimy andro misesy mialoha ny fialan-tsasatra roa andro.
Ny fotoana tonga lafatra hakana AOD 9604 dia 30 minitra talohan'ny nisakafoanana. Raha manao izany ianao, dia mamela ny vatanao hampihena ny zava-mahadomelina raha mbola mijanona foana ny vavony.
Ny dosia tokana ao amin'ny AOD 9604 dia mandany ambany noho ny zavatra handoavinao ny habetsahan'ny HGH.
(2) Ahoana ny fomba hametrahana araka ny tokony ho izy ny AOD 9604?
Misy safidy roa amin'ny fitsaboana AOD 9604. Na izany aza dia ataonao izany na ataon'ilay dokotera. Tiako ny mamono tena.
Ny toerana tsara indrindra ahafahana mitsabo ny zava-mahadomelina dia ao anatin'ilay vatana matavy manodidina ny kibony. Ny fametrahana subcutaneous dia mamela ny AOD 9604 hiditra ny famoahana ao anatin'ny fotoana ambany noho ny andron'i New York. Tsy toy ny fomba fanao amin'ny fanafody fanafody toy ny intravenile na ny intramuscular, ity fomba ity dia manana bioavailability. Noho izany, ny vokatra AOD 9604 dia mivantana.
Rehefa mividy AOD 9604 ianao, dia matetika ny fitifirana dia amin'ny endrina volo. Manoloana anao ny fanaovana fampidinana rongony. Na izany aza, aza manahy satria ny famoronana ity vahaolana ity dia tsy fika firy. Avelao aho hitondra anao.
Voalohany indrindra, mila manamaivana ianao mba hifangaro amin'ny vovo-mena AOD 9604 (221231-10-3). Mariho fa ny rano dia tsy rano mahazatra. Ataovy azo antoka fa mangetaheta na bakteriostatika. Azo antoka fa tsy te hanakorontana sy hampidirana anao amin'ireo prônes-n'ny areti-mifindra ianao, moa ve ianao?
Ny habetsaky ny manify dia miankina amin'ny habetsahan'ny voanjo. Raiso, ohatra, raha mitazona ny 2mg amin'ny zava-mahadomelina ilay tavoahangy, dia ampy ny 1ml. Rehefa avy nandrotsaka rano tao amin'ny AOD 9604 vovony mena dia avelao izy hamongotra azy amin'ny fihodinana ilay tavoahangy eo amin'ny rantsantanana.
5.Rahoviana aho no hahazo ny AOD 9604 Results?
Amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa dia manomboka manoratra ny valin'ny AOD 9604 amin'ny faran'ny herinandro 12. Na izany aza, ny vokatr'izany dia mitodika any amin'ny sasany. Ohatra, ny fanatontosana tsy tapaka ary ny fanarahana karazan-tsakafo henjana kalorie dia hahatratra ny lanjan'ny fahaverezan'ny vokatra.
Raha te ho very ny fatin-tsolika lehibe ianao, dia asio ny tongotrao tsara indrindra ary esory amin'ny karbôbia avo sy kaloria. Tokony hifikitra amin'ny fitondrana fampiharana ihany koa ianao. Mazava ho azy fa tsy midika akory izany hoe tokony hanao fiofanana goavam-be na fiakaram-batana mahery vaika ianao. Ny mifanohitra amin'izany, afaka mandositra kilaometatra vitsivitsy ianao ao anaty fitoeram-pandehanana, mitsangatsangana eny an-tanàna, mitsambikina, manamboatra siramamy, na asa hafa mahasoa.
Raha raisinao ny AOD 9604 raha tsy mampiasa na manara-maso ny planin-tsakafo henjana ianao, dia mety ho very eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny folo pounds.
Ankoatra izany, ny anton'ny taona, ny fahasalamana manokana, ary ny tantaram-pianakaviana dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny vokatra AOD 9604. Raiso, ohatra, ireo mpampiasa manana metabolismika mavitrika dia manana vintana tsy azo antoka ny fisoratana anarana vokatra tsara. Raha mateti-piterahana na ara-pianakaviana ny fankahalàna anao, dia hikorontana ny asan'ity peptide ity.
Ny fampiasana fanafody hafa na fanafody hafa dia hampidina ny dingam-piterahana na hampihenana ny fihetsika amin'ny fitsaboana. Zavatra iray tiako ho azonao dia ny hoe tsy misy olona roa mitovy. Na ny zava-drehetra aza, na ny dian-tsaintsika aza dia toy ny sira sy cheese.
Raha toa ka mandinika ny AOD 9604 ianao amin'ny fiterahana, dia manazava ny fepetra rehetra ilainao ny mpanamboatra pharmacist anao.
6.Misy fiantraikany amin'ny fihariana ve ny AOD 9604?
Misy zava-mahadomelina tsy misy fiantraikany ve? Eny, na dia mandray rano aza dia misy fiantraikany eo amin'ny rafitra ataon'ny olombelona.
Avelao aho hitondra anao amin'ny loza mety hitranga rehefa ianao injection AOD 9604. Alohan'ny ahafahako milaza zavatra hafa, ity peptide ity dia tsy mahagaga toy ny HGH. Noho izany, ny fihenan-keloka ratsy dia tsy hilaina intsony. Ny hany voka-dratsin'ny fahaverezan'ny fahasahiranana dia ny fifanajana amin'ny fiatrehana ny tsindrin-tsakafo hafa, ny fanafody, na ny fepetra.
Jereo ny mety ho an'ny AOD 9604 rehetra, izay mety hahatsara anao indrindra;
Fanehoan-kevitra toy ny fanaintainana, fanodinkodinam-panala, na fanodinkodinam-panafody
7.Fikarohana momba ny klinika momba ny AOD 9604
Ny fikarohana sasany momba ny fikarohana momba ny klinika AOD 9604 dia manohana ny fampiasana io fitsaboana io amin'ny fitantanana ny matavy loatra. Na dia ny modely voalohany aza dia natao tamin'ny Metabolic Pharmaceuticals, fa raha ny zava-mahadomelina dia mahomby amin'ny olombelona toy ny totozy.
(1) Eo andamosina:
Araka ny efa nolazaiko tany aloha, AOD 9604 dia ampahany lipolytika amin'ny hormonal ny fitomboan'ny olombelona. Noho izany antony izany dia samy manana toetra mitovy izy ireo, anisan'izany ny fitsaboana ny matavy loatra, ny fitantanana ny lanjany, ary ny fihenan'ny tavy be loatra.
Rehefa nanandrana ny fetim-pototra mahery vaika ireo siantifika mpikaroka, ny vokatra AOD 9604 dia tsara daholo. Tsy toy ny HGH, io peptide io dia tsy mamela ny vokatra hafa ho an'ny mpampiasa. Na izany aza, mba handresena ny fankatoavan'ny Tale ara-pahasalamana (TGA), dia nilaina ny fisedrana olombelona mahomby.
Ny tanjon'ity fandinihana ity dia ny fametrahana raha toa ny AOD 9604 dia nisy fiantraikany mitovy amin'ireo nasehon'ny hormonina fitomboan'ny olombelona. Ilaina ny manamarina raha toa ny fitsaboana amin'ny fiantraikan'ny IGF-1, ny fandeferana glucose, na ny fanoherana ny insuline.
Ao amin'ny fikarohana momba ny klinika AOD 9604, dia nandray anjara tamin'ny fandalinana enina samihafa ny olon-dehibe 900 +. Ireo fitsapana rehetra ireo dia nalaina randomized, double-blind ary placebo-controlled. Olana ara-pahasalamana ireo marary saingy marary saina. Ny rà nalainy dia nodinihina mba hanamarinana ny antilôsista antagonista. Ity dingana ity dia ny hanapahana ny mety hisian'ny tsy fahaleovantena.
Ny fitsapana roa voalohany dia nomena fitsaboana miaraka amin'ny dosage AOD 9604 manelanelana 25 sy 400μg / kg. Ny fe-potoana efatra farany tamin'ilay fianarana dia nampiasa dose oral ny 1mg ka 54mg.
Tsy toy ny fitsapana amin'ny klioba HGH ity peptide ity fa tsy nisy fiantraikany teo amin'ny ambaratonga IGF-1. Rehefa notsapaina ny fandeferana glucose, dia tsy nisy vokany ratsy teo amin'ny metabolisma amin'ny voambolana kisendrasendra. Ao amin'ny fanandramana antibody, tsy nisy anti-AOD9604 natao ho hita eo anivon'ireo marary.
Na dia nisy voka-dratsiny aza ny vondrona mpikaroka dia tsy nisy na dia iray tamin'izy ireo aza. Ohatra, ny ankamaroan'ny lohahevitra dia mahazo aretina miadana na menatra.
Na inona na inona ny fitsaboana amin'ny fotoana fohy na maharitra mandritra ny fotoana maharitra, dia afaka mandefitra amim-pahatokiana izany ny marary. Ity tombony AOD 9604 ity dia tsy azo lavina amin'ny vondrona mpitantana. Ankoatra izany, tsy nisy ny fakana an-tsokosoko voarakitra.
AOD 9604 dia manana profil-toetrandro avo lenta. Rehefa ampitahaina amin'ny loha-hevitra ny lohahevitra, tsy azo lavina ny fiarovana ireo vondrona roa ireo. Na dia tamin'ny fitantanana 24-herinandro aza, dia mbola tsy nisy ny fisehoan-javatra mampidi-doza toy ny tranga misy amin'ny fitsaboana HGH.
8.Fanontaniana mahaliana momba ny AOD 9604
(1) Inona ny dosage nomena ny AOD 9604?
AOD 9604 dosage dia eo anelanelan'ny 120mcg sy 400mcg isan'andro. Na dia doka tokana aza dia misy olona sasany dia hizara azy io ho fepetra roa na telo. Tokony haka azy io alohan'ny hatory ianao.
Taorian'ny fankatoavana ny FDA, azonao atao ny mampiasa azy io ho sakafom-bary ao anatin'ny diplaoma ambony indrindra amin'ny 1mg.
(2) Inona no fampiasana matetika ny fampiasana AOD 9604?
Na dia eo amin'ny fitantanana maharitra aza, ny AOD 9604 dia tsy hanatrika ny fialantsasatra na ny fisehoan-javatra ratsy.
Tena tsara ny manao sikiky efatra herinandro. Raiso ny fitsaboana mandritra ny dimy andro ary ataovy marika roa andro. Na izany na izany, mitantana mandrakariva ny AOD 9604 mandritra ny herinandro maromaro alohan'ny hijanonana fito andro.
(3) Inona no karazana rano afaka mifangaro amin'ny AOD 9604?
Tsarovy fa ity fomba fanaterana ity dia amin'ny alalan'ny fampidirana fa tsy fitantanana ny orinasa. Ampiasao ihany ny rano mangatsiaka mba hampidirana ny AOD 9604 manara-penitra. Ity vinaingitra bakteriostika ity dia ahitana be loatra ny alkaolika benzyl, izay manakana ny fivelaran'ny bakteria mahasalama.
Na dia mihevitra aza ianao fa tsy manana safidy ianao dia aza mandainga amin'ny tenanao amin'ny fanosorana rano avy amin'ny mpaninjara na ny tapakila. Tsy te ho faty tanora ianao, sa tsy izany?
(4) Firy ny rano mila ampiana? Ahoana no ahafahanao manambatra ny rano sy ny AOD 9604?
Ny habetsaky ny manamboninahitra ilainao dia miankina amin'ny habetsaham-pako. Raiso, ohatra, arotsaho ao anaty fonosana 5mg ianao AOD 9604 vovoka. Ilainao ny mividy rano bakteriostatic 2ml mba hampiasaina ho mendri-kaja.
Na dia mety ho toy ny pioola grika aza izany, avelao aho haka fotoana kely hanazavana ny fomba fanomanana. Amin'ny fenitra iraisam-pirenena, 1ml dia mitovy amin'ny 200IU. Raha manaiky ianao fa manomana ny 5mg amin'ny peptide, dia hiafara amin'ny 5000mcg amin'ny fampiatoana AOD 9604 ianao.
Alohan'ny ahafahanao mampifangaro azy roa, dia azonao antoka fa ao amin'ny efitra fisainana. Amin'izao tranga izao dia mampiasa ny 5mg an'ny AOD 9604 vovoka mena aho, izay hialako amin'ny rano 200IU. Apetaho ao anaty vovobony ilay mpanangona ary avelao izy hametraka izany mandritra ny minitra 10. Aorian'izay, afaka mampifangitra ireo mpanorina amin'ny alàlan'ny fihodinana am-pitiavana ilay tavoahangy.
Raha naka fanafody isan'andro ny 300mcg ianao, dia mety haharitra telo herinandro ilay fitsaboana. Amin'ity tranga ity dia heveriko fa mety hampidiranao AOD 9604 isan'andro ianao fa haka roa andro isan-kerinandro.
(5) Tokony haka ny AOD 9604 amin'ny baomba mando na amin'ny sakafo ve aho?
Misy safidy roa amin'ny fitantanana ny AOD 9604 amin'ny fiterahana. Azonao atao ny manao izany amin'ny vavony iray tsy misakafo maraina na aorian'ny sakafo farany alohan'ny hatoriana.
Raha vao mangiran-dratsy, dia tsy misy sakafo na rano ao amin'ny rafitra. Rehefa mandray AOD 9604 ianao, dia ho mora mandalo amin'ny fivezivezena. Ny tahan'ny fanodinana dia ho ambony indrindra, ary noho izany, ny avoakan'ny biocratie dia ho avo.
Ampiasao tsara ny AOD 9604 antsasak'izay alohan'ny sakafo voalohany amin'ny andro na 30 minitra aorian'ny sakafo farany.
(6) Ahoana ny fametrahana AOD 9604?
Tena marina AOD 9604 mpamatsy pooder dia halefa foana ity vokatra ity amin'ny endriny ambany. Ny antony dia ny miaro ny peptide voadona amin'ny fiovan'ny toetrandro tsy miangona mandritra ny fotoana fohy. Ny fampielezana ny zava-mahadomelina dia mahatonga azy ho mafy orina mandritra ny vanim-potoana maharitra satria manamaivanana ny fahavoazana.
Tokony hitahiry AOD 9604 amin'ny hafanana mafana ianao. Raha vao manokatra ny tavoahangy ianao, dia ataovy izay hahazoana hafanana amin'ny 2 ° C mankany 8 ° C. Ao anatin'io sehatra io, ny peptide dia mbola manan-kery mandritra ny roa herinandro. Noho izany, raha mividy AOD 9604 be dia be aho, dia azoko atao ny mamerina indray ny zavatra ilainao mandritra ny andro. Na izany aza dia azonao atao ny manala azy amin'ny -20 ° C mba ahafahan'ny vahaolana mijanona ho maharitra mandritra ny telo volana manaraka.
Ao amin'ny endriky ny vovo-dronono hohanina, tokony hitazona ny simika ao amin'ny frizidera eo amin'ny -20 ° C. Koa satria toro-hevitra matotra no tonga amin'ny fampitandremana marina, dia manoro hevitra anao aho mba tsy hivezivezy matetika sy handoto ny AOD 9604.
Ny lafiny iray manan-danja hodinihina dia manamafy ny daty fahataperan'ny zava-mahadomelina. Io lafiny io dia miova arakaraka ny AOD 9604 mpamatsy entana sy ny daty famokarana.
(7) Aiza no hividianako AOD 9604 amin'ny aterineto?
Raha te hividy AOD 9604 ianao, ny hany fomba azo antoka hahazoana izany dia amin'ny tranokala an-tserasera. Farafaharatsiny, dia hamonjy anao ny fotoana sy ny vola.
Ny ankamaroan'ny fanjakana, anisan'izany i Etazonia sy Aostralia, dia tsy nankasitraka ny fampiasana, famokarana, na famerenana ny AOD 9604. Hatreto, ny hany lalana ara-dalàna azon'ny fitsaboana dia ao anaty ordinatera manan-kery avy amin'ny dokotera tena izy.
Ny fandraràna dia nanjary nanakiana ny disadisa 2013 nampidirina ilay lalàna malaza indrindra any Aostralia, izay lazaina fa mpitsikilo ity fanafody fanoherana ity. Eny, ireo fifandirana ireo dia fanombatombanana fotsiny nivezivezy tahaka ny fanosihosena Shinoa. Na dia izany aza, maro ireo masoivoho manohitra ny doping, anisan'izany ny WADA, no nanameloka ny fampiasana ny AOD 9604 amin'ny kianja fanatanjahan-tena.
Ny fitsanganana amin'ny mpamatsy solika AOD 9604 dia tsy mandeha eny amin'ny valan-javaboary. Raha mandinika ny lalàna henjana mifehy ny fampiasana azy ianao, dia mety ho lavo amin'ny sandoka avy amin'ny mpivarotra eo an-toerana. Mbola ratsy kokoa aza ny fahatsapanao fa ny sasany amin'ireo mpamokatra ireo dia mbola tsy mahafeno ny fepetra fanaraha-maso kalitao.
Noho izany, manao ahoana ny famelezanao amin'ny mpamatsy vovony AOD 9604 an-tserasera rehefa mandefa mivarotra ny peptide? Avelao aho hanazava. Ataovy azo antoka ny mijery ny famerenana ny vokatra. Azo antoka fa te hahalala izay lazain'ny mpampiasa ianao, ny valiny, ny traikefa, ary ny fanombanana ankapobeny.
AOD 9604 dia mandoa miankina amin'ny mpivarotra, ny fonosana tianao, ary ny toerana. Ohatra, ianao dia hamoaka latsaky ny $ 20 noho ny 2mg vial. Na izany aza, rehefa mividy AOD 9604 amin'ny volanao ianao, dia afaka mividy ambany $ 12 isaky ny tavoahangy.
Ny vaovao tsara dia tsara noho ny nahazoan'ny 10 ny vidin'ny XenumX iray. Na ny mpikaroka siantifika aza dia mitazona ny toerany fa tsy misy lanjany ny vokatry ny AOD 1, ny fanadihadiana dia manamarina fa mora kokoa amin'ny olombelona ny fanafody.
Raha te hahomby ianao AOD 9604 mahasoa, tokony tokony ho mavitrika ara-batana ianao. Atsaharo ny famokarana anao any amin'ny faritra mampionona. Tokony hanao fampihetseham-pisainana kely ianao ary hampivoatra drafitra ara-pahasalamana. Moa ve nilaza taminao aho fa tsy te hangina amin'ny voankazo mamy, karbaon-tsakafo ary kaloria? Eny, fantatrao ankehitriny.
Na dia tsy ankatoavina amin'ny fampiasana pharmaceutika aza ny peptide, dia mbola afaka mampiasa azy io ianao mba hanaovana tanjona fikarohana. AOD 9604 dia tsy dia mandoa vola raha mividy ny vovony ianao.
Mandiniha miaraka aminay mba hametraka baiko avy amin'ny mpamatsy AOD 9604 mpamatsy.
Stier, H., Vos, E., ary Kenley, D. (2013). Ny fiarovana sy ny fandeferana ny Hexadecapeptide AOD-9604 amin'ny Olombelona. Journal of Endocrinology and Metabolism.
Ng, FM, Sharma, L., Masoandro, J., Jiang, WJ, Libinaka, R., ary Gianello, R. (2000). Fanadihadiana momba ny metabolika momba ny lopoly (sentence lipolytique synthétique) (AOD-9604) amin'ny hormonina ho an'ny olombelona.
Heffernan, M., Ng, FM, Summers, RJ, Thorburn, A., et al. (2001). Ny fiantraikan'ny GH olombelona sy ny fôpitaly lipolytika (AOD-9604) amin'ny metabolism amin'ny lipida taorian'ny fitsaboana tratry ny aretim-boka tao amin'ny Obese mice sy β3- MISY MISY TSY MISY.
Heffernan, M., Gianello, R., Ng, FM, et al. (2001). Mihabetsaka ny fihanaky ny fatin'aretina sy ny lanjany be loatra amin'ny tazomoka Obese vokatry ny fitsaboana mitaiza amin'ny Hormone Human Growth na ny Fragment C-terminal. Gazety iraisam-pirenena momba ny matavy.